डडेल्धुरा, कात्तिक २३ । स्थानीय सरकार गठन भएको चार महिनामै ‘बर्थिङ सेन्टर’ निर्माण गरी सेवा सन्चालनमा ल्याइएको छ ।
बैतडीमा सुरक्षित प्रसुति सेवा केन्द्रको संख्या १ सय २७ पुग्यो
बैतडी, कात्तिक २३ । बैतडीमा सुरक्षित प्रसुति सेवा केन्द्रको संख्या १ सय २७ पुगेको छ ।
कांग्रेस र कम्युनिष्टको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य सम्बन्धमा यस्ता छन्, नीति–कार्यक्रम
प्रज्ञा तिमल्सिना/भरत केसी (इमेज): काठमाडौं, कात्तिक २२ । निकै महत्वाकांक्षी चुनावी घोषणापत्र ल्याएका नेपाली कांग्रेस र वाम गठबन्धनले स्वास्थ्य क्षेत्र विकासका लागि भन्दै ल्याएका नीति र कार्यक्रमप्रति विज्ञहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।
जिल्ला अस्पताल धादिङमा डिजिटल एक्स–रे सेवा संचालन
नवराज छत्कुली/ धादिङ, कात्तिक २२ । जिल्ला अस्पताल धादिङमा डिजिटल एक्स–रे सेवा संचालनमा आएको छ ।
नगरपालिकाबाट बजेट निकासा नहुँदा अस्पतालको सेवा प्रवाहमा समस्या
विनोद सिंह विष्ट/ बैतडी, कात्तिक २२ । दशरथचन्द नगरपालिकाले समयमा बजेट निकासा नगर्दा जिल्ला अस्पताल बैतडीले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ ।
क्यान्सरपीडित बालबालिका निःशुल्क औषधि चर्को मूल्यमा किन्न बाध्य (भिडियो)
प्रज्ञा तिमल्सिना (इमेज):काठडमाडौं, कात्तिक २१ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले क्यान्सरपीडित बालबालिकाको निःशुल्क उपचारका लागि कान्ति बाल अस्पताललाई निकासा गरेको वार्षीक ५० लाख रुपैयाँ ‘बालुवामा पानी खनाएजस्तै’ भएको छ ।
कोशी अन्चल अस्पतालको एक्सरे मेसिन नबन्दा समस्या
मोरङ, कात्तिक २१ । कोशी अन्चल अस्पताल विराटनगरको एक्सरे मेसिन मर्मत नहुँदा समस्या भएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सातदिने ‘अल्टिमेटम’
काठमाडौं, कात्तिक २० । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका वरिष्ठ हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ प्रा. डा. गोविन्द केसीले सरकारले जारी गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिले ढिलाइ गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
काठमाडौं, कात्तिक २० । नेपालमा पहिलोपटक सर्पदंशको औषधि उत्पादन हुने भएको छ ।
एक वर्षभित्र काठमाडौंलाई धुमपानरहित शहर बनाइने
काठमाडौं, कात्तिक १९ । आगामी एक वर्षभित्र काठमाडौं शहरलाई ८५ प्रतिशत धुमपानरहित बनाइने भएको छ ।
दुई दशकदेखि बन्द मिसन अस्पताल सन्चालन गर्न माग
पर्वत, कात्तिक १९ । करिब दुई दशकअघिदेखि बन्द मिसन अस्पताल सन्चालन गर्न स्थानीयवासीले माग गरेका छन् ।